Nzira yekutenga online zvakachengeteka? | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | eCommerce, Marketing, Chengetedzo
Chimwe chezvinangwa zvinonyanya kudiwa chechikamu chikuru chevatengi kana vashandisi ndechekuita kwavo kutenga online zvakachengeteka. Kwete pasina, iwe unogona kutarisana nenjodzi dzakateerana izvo zvichave zvinhu zveimwe mhando yekuongorora uye kudzidza mune zvimwe zvinyorwa. Nekuti chinhu chekutanga chaunofunga kufunga nezvacho kubva zvino zvichienda ndechekuti imari yako wega iri panjodzi nerudzi urwu rwekushanda bhizinesi.
Kuti utenge online zvakachengeteka, hauzove nesarudzo kunze kwekuita a nhevedzano yemazano yaunodzivirira nayo aya mamiriro ezvinhu mashoma anodikanwa nevashandisi. Muchokwadi, ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei vanhu ava vasingarongedzere kutenga kwavo kuburikidza neiyi tekinoroji yekushambadzira chiteshi. Kana kuti zvirinani kuti uzviite nedhivhosi yakakura yekuchengetedzeka uye chengetedzo mumatanho atinofanira kutora kubva zvino zvichienda mberi.
Tiri kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kuti zano iri rekupa chengetedzo mumabasa epamhepo rinofanira kunge rakavakirwa pazviito zvakaratidzwa kushanda kubva pakutanga. Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kuzvibvunza kubva ikozvino zvichienda mberi kana tichinyatsoziva kutenga zvakachengeteka online. Kuti uzo dzivisa chero chinonyadzisa Nezve zvaunofarira isu tiri kuzokupa iwe kwakasiyana-siyana ezvikumbiro izvo zvisingazombokuodza moyo.
1 Tenga online: shandisa yakachengeteka kubatana
2 Iva neruzivo rwakawanda uye rwuri nani
3 Unganidza data nezvechitoro chepamhepo
4 Tora matanho kubva kune zvigadzirwa zvehunyanzvi
5 Ongorora kufamba kwako kwekadhi rechikwereti
6 Ipa rako pachako data zvakachengeteka
7 Wongorora maitiro ekudzoka
8 Hazvisi zvese zvitoro zvepamhepo zvakafanana
Tenga online: shandisa yakachengeteka kubatana
Pakutanga, isu tinofanirwa kuongorora kuti kunyangwe iri nyore uye iri nyore kufamba uye kutenga zvakabatana kunetiweki dzemabhawa, zvitoro zvekutengesa kana zvitoro zvepanyama, zvisiri zvechokwadi ichokwadi ndechekuti manetwork aya kazhinji haana kuchengetedzeka. Kana iwe uchizotamisa yakakosha yako pachako ruzivo kana kuita muripo mu online fomati, zvichave zvichidikanwa kwazvo kuti kubva ikozvino uchiita basa iri kuburikidza netiweki yakachengeteka. Iwe unodzivirira iko kweapo nekutyisidzira uko kunogona kukanganisa yako wega kana yemhuri mari.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti iri nyore zano rekuita rinogona kuburitsa zvimwe mamwe mabhenefiti. Semuenzaniso, iyo chokwadi chekuti iwo mamaki ekutengesa ayo anopa vimbiso, kwete mukutenga chete, asiwo mukushambadzira kwezvigadzirwa zvavo, masevhisi kana zvinhu. Zvekuti nenzira iyi, ivo vanogona kuomesa mashandiro aya nezvose zvinogoneka vimbiso. Kunze kwechimiro chemutsara webhizinesi ravo kana hunhu hwemakambani edigital aya.
Iva neruzivo rwakawanda uye rwuri nani
Imwe yekiyi dzekugutsa ichi chinangwa chinodikanwa nevashandisi kuwana hombe usati waita kutenga pamhepo. Mupfungwa iyi, imwe yemakiyi ndeyekuti zvinodikanwa kuti ubvunze nezvechitoro mumainjini ekutsvaga, masocial network uye maforamu. Kuongorora kuti ndeapi mamwe maonero evamwe vashandisi nezvayo kunogona kupa ruzivo rwakawanda. Saka kuti pakupedzisira hapana chinoshamisira chero mhando nezve mashandiro anoitwa muchitoro kana bhizinesi rehunhu uhwu.
Zano rinoshanda kwazvo rekuzviita kubva zvino zvichienda mberi mune nhema mukusarudza madomeni ane padlock pane yavo webhusaiti. Kune akawanda uye zvakare zvakareruka kwazvo kuti uzvizive kuitira kuti kutengisa kuitwe nerunyararo rwepfungwa. Hazvishamisi kuti, zviripo chaizvo kushandisa imwe nguva kuita iri basa nekuti pakupedzisira mhedzisiro yacho ichave inogutsa kwazvo kune zvido zvedu pachedu. Uye ichi chinangwa icho vese vashandisi vepamhepo vari kutsvaga.
Naizvozvo, isu tinofanirwa kutsvaga online zvitoro zvine kero tanga neHTTPS uye ratidza padlock pakero bar. Izvi zvinoona kuti ruzivo rwunopfuudzwa rwakanyorwa.
Unganidza data nezvechitoro chepamhepo
Imwe yemakiyi akakosha muchikamu chino inogara muchokwadi chekuti ruzivo rwunopihwa nechitoro chepamhepo chinofanira kuongororwa nguva dzese: ivo ndivanaani, vane kero yemutero, ndeipi data yavanotora kubva kuvashandisi uye nechinangwa chei, nzira dzekubhadhara dzavanobvumira, kutumira uye kudzoka mutemo.
Iyi imwe nzira yatinofanira kupedzisa kubva zvino zvichienda mberi sezvo tichigona ipa zvakawanda zvivimbiso mukutenga yezvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvekambani yedigital. Kunyangwe ichi chikamu cheichi chiitiko chingave chisiri chakaomesesa kupfuura zvimwe zvese. Asi pakupedzisira tichava nemubairo munzira yekutenga zvakachengeteka kupfuura pakutanga. Nekuti isu tichava neruzivo rwatinoda kubva kukambani yatinoda kubata kubva kune yekutengesa maonero ekuona.
Tora matanho kubva kune zvigadzirwa zvehunyanzvi
Kune rimwe divi, zvinokurudzirwawo kwazvo kuti panguva ipi neipi yatinayo yakaisa antivirus kutonga mavhairasi angangoita anokwanisa kuunganidza ruzivo rwemunhu uye rwekubhengi kubva pachigadzirwa. Zvakare, iyo software yakaiswa pane chishandiso inofanira kunge iri yemazuva ano. Iri izano rinoshanda kwazvo kuti tikwanise kugadzira kana kusimbisa kutenga pamhepo nguva dzese.
Kwete chete kubva kumunhu komputa, asi kubva chero chigadzirwa chehunyanzvi. Kubva kune nhare mbozha, mapiritsi kana zvimwe zvishandiso zvine maitiro akafanana. Iko kupi kupi kunotsvedza mukuchengeteka kwako kunogona kukanganisa kutenga kweaya maitiro. Mhinduro iyi inogona kunge iine mutengo wemari, asi muchokwadi inofanirwa kuitora nekuda kwekuchengetedzeka kwepamusoro kwayinotipa mune ino mhando yekutengesa mashandiro. Zvirinani semupiro kubva kuvashandisi pachavo mukutsvaga kwechitatu mapato kukwanisa kuwana data redu nekunyepedzera.
Ongorora kufamba kwako kwekadhi rechikwereti
Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekunge waita zvakati wandei kutenga pamhepo pane kutarisa kuti zvese zvibhadhariso paaccount yako zvinozivikanwa uye unazvo. Iwe uchafanirwa kunyatsoteerera kune chero fungidziro yekufamba muakaundi yako yebhangi kana kiredhiti kana makadhi ekubhengi. Kana zvirizvo, iwe unenge usina imwe mhinduro kunze kwekubata yako kiredhiti institution nekukurumidza kuitira kuti uve wakabatwa nechitsotsi kana kuita kwakaipa kunoitwa nevechitatu mapato.
Nepo kune rimwe divi, hapana mubvunzo kuti makwara edhijitari anowanzo tenderera kukudziridza iyi mhando yezviito zvekunyepedzera. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve wakanyanya kuchenjera pamberi peaya mamiriro anogona kuitika anogona kubuda chero nguva. Kuve chimwe chezvinhu zviri kukurudzira zvakanyanya kuti kutenga online kune njodzi kana kwete. Beyond imwe nhevedzano yehunyanzvi kufunga.
Ipa rako pachako data zvakachengeteka
Imwe yenjodzi huru mukushanda pamhepo inotora kubva pakuti iwe unogona kupa data rako kune vechitatu mapato kana makambani avanoshandisa zvimwe zvinangwa. Mune ino pfungwa, iwe unofanirwa kuve wakawanda chenjera nezvega data kana nyanzvi dzinokubvunza (nhare, zita rehama kana nzvimbo yekuzvarwa). Zvinokurudzirwa zvakare kuti ushandise zvinoshandiswa kana maturusi anokubatsira kudzivirira kuba data, kunyanya kana komputa yako iine hutachiona.
Zvakare kuitisa mashandiro ebhizinesi kubva munzvimbo dzakachengeteka uye dzakavimbika. Chiito chakakosha ndechekuti haushandise makomputa eruzhinji anokwanisa kuve panjodzi yerudzi urwu yezviito zvishoma zvinodiwa nevashandisi. Zvimwechetezvo, zvese zvechizvino-zvino zvemidziyo zvemakomputa zvinoshanda kwazvo kuitira kuti mamiriro asingadiwe asaitike kune vese vamiririri mune ino maitiro.
Wongorora maitiro ekudzoka
Kazhinji kazhinji kuti chikamu chekupedzisira cheruzivo chinenge chisiri chechinyakare uye nekudaro hachina basa kwauri. Iyo imwe ye data iro raunofanira kutarisa kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti izvo zviri panjodzi hazvisi chete zvigadzirwa zvakatengwa, asi mari inogadzirwa mukufamba uku muzvitoro kana mabhizimusi edhijitari. Mushure mezvose, kusazadzisa ichi chinodikanwa kunogona kukudyira zvakanyanya.
Hazvisi zvese zvitoro zvepamhepo zvakafanana
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuziva kuti ese mabhizinesi aya akafanana uye nekudaro iwe unofanirwa kuve unonyanya kusarudza mune yako sarudzo. Zvekuti pakupedzisira iwe sarudza iyo inokupa iwe yakawanda chengetedzo uye inovimbisa mukutenga. Kuburikidza nemaparamende apfuura atakakuburitsa pachena, iwe unozokwanisa kuzadzisa izvi zvinangwa zvinodikanwa. Uye pamusoro pezvose nekuti zvichave zvakakosha kuti uzviite nekuti pakupera kwezuva imari yako yauri kubhejera mune iyi mhando yekutengesa mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Nzira yekutenga online zvakachengeteka?